प्रभु इन्स्योरेन्सको खुद बीमा शुल्क आर्जन ९% ले बढ्दा, अन्य सूचक कस्तो ? – Insurance Khabar
प्रभु इन्स्योरेन्सको खुद बीमा शुल्क आर्जन ९% ले बढ्दा, अन्य सूचक कस्तो ?
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७५/७६को चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कम्पनीको नाफा १० प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले २४ करोड २६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमाससम्ममा कम्पनीको बीमा कोषमा ५८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले बीमा कोषमा ४५ करोड १६ लाख रुपैयाँ रकम रहेको थियो । गत आर्थिक वर्षकधो सोही अवधिको तुलनामा कम्पनीको बीमा कोषमा २९ प्रतिशतले बढाएको हो ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमाससम्ममा आइपुग्दा कम्पनीकोे जगेडा कोषमा २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ सञ्चिती रहेकोे छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १४ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चिती गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कम्पनीको जगेडा कोषमा १ सय २ प्रतिशतले बढी हो ।
त्यसैगरी कम्पनीको खुद बीमा शुल्क आर्जन ९ प्रतिशतले कढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले ५० करोड ३५ लाख रुपैयाँमा बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधमा कम्पनीले ४६ करोड १४ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कम्पनकिो बीमा शूलक आर्जन ९ प्रतिशतले बढी हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को १२ महिनाको अवधिसम्म आइपुग्दा कम्पनीले १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको खुद दाबी भुक्तानी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षो सोही अवधिमा कम्पनीले १२ करोड २३ लाख रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरको थियो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा कम्पनीको दाबी भुक्तानी ३४ प्रतिशतले बढी हो ।
त्यस्तै, कम्पनीको यस अवधिसम्म कुल दाबी भुक्तानी हुन बाँकी रकम भने १५ करोड ९७ ६१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्रतिसेयर आम्दानी २६ रुपैयाँ ४९ पैसा रहेको छ ।